တန်ဆောင်တိုင် အထူး Smartphone Promotion (NIPDA ယိုးဒယားဟန်းဆတ်)(13.11.2016မှ18.10.2016ထိ) | မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
» Mobile သတင်းရေးရာအဖြာဖြာ
» တန်ဆောင်တိုင် အထူး Smartphone Promotion (NIPDA ယိုးဒယားဟန်းဆတ်)(13.11.2016မှ18.10.2016ထိ)
pirce=90000 kyat အားသာချက်
================ Android Version=5.1
Card ,Phone Bill ,Internet လျောက်ပြီးသား,အာမခံ 6လပါတဲ့ Power Bank,အာမခံတစ်သက်တာပါတဲ့ Memory 8GB တစ်ကဒ်,Iphone ပါဖတ်တဲ့ Selfie Stick လက်ဆောင်တွေပေးနေပါတယ်
------------- Iphone 6S+ ပါပဲ Clone မဟုတ်ပါဘူး ဒီဇိုင်းသွားတူနေတာပါ Android 5.1 နဲ့ထုတ်ထားပြီး Screen6လက်မနဲ့ထုတ်ထားပါတယ် Back Camera 8MP သုံထားပါတယ် Font ကတော့ 5MP ပါ Android Version ကတော့ 5.1
ထည့်ပေးထားပါတယ် Internal ကတော့ 8GB ထည့်ပေးထားလို့ Zapya နဲ့ကူးသလောက်မပြည့်ဘူးလေ ထပ်စိုက်ဖို့ 32GB ထိ စိုက်လို့ရလို့ Default Memory ကို SD ကဒ်ကိုထားပြီး ကြိုက်သလောက်ကူးလို့ရပါတယ် CPU အပိုင်းမှာလည်း MTK Chipset ကိုသုံးထားလို့ မပူဘူး အားခံတယ် ဂိမ်းတွေလည်းကောင်းကောင်းဆော့လို့ကောင်းမှာ ကြိမ်းသေမှာပါပဲ Motion တွေလည်းပါတော့ Double Touch ဆိုပါဝါပွင့်တာ C ဆိုဖုန်းပွင့်တာလည်း လုပ်လို့ရတယ်နော် ကျန်တဲ့ကလိစရာတွေလည်းကြံသေးတယ်နော့်
၁နှစ်ပေးထားပါတယ် ၀ယ်တဲ့အချိန်ကစပြီး ၁လအတွင်း Error တတ်ပါက အလုံးသစ်နဲ့ပြန်ချိန်းပေးရမယ့်အနေထားဆိုအလုံးသစ်နဲ့ပြန်ချိန်းပေးပါတယ် ပစွံည်းပေါသလို ပြင်စင်ချိန်လည်းအမြန်ဆုံးလုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျ ၀ယ်မှာလား အခမဲ့အိမ်ထိအိမ်ရောက်လာပို့ပေးတယ်နော့် အဲ့ရောက်မှရှင်းပါ ကံစမ်းမဲနိူက်ခိုင်သေးတယ်နော့်
--------------- 7i ကတော့ တော်တော်များများကြိုက်ပါတယ် လေးထောင့်ကျတာရယ်Camera ဘေးဘက်ရောက်တာရယ်
တော်တော်များများကြိုက်ကြပါတယ် ack Camera 8MP သုံထားပါတယ် Font ကတော့ 5MP ပါ Android Version ကတော့ 5.1 ထည့်ပေးထားပါတယ် Internal ကတော့ 8GB ထည့်ပေးထားလို့ Zapya နဲ့ကူးသလောက်မပြည့်ဘူးလေ ထပ်စိုက်ဖို့ 32GB ထိ စိုက်လို့ရလို့ Default Memory ကို SD ကဒ်ကိုထားပြီး ကြိုက်သလောက်ကူးလို့ရပါတယ် ဖိုက်ဘာ ကော်နဲ့လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ Metal နဲ့လုပ်ထားလို့ သုံးသူများ ကြိုကမယ်ထင်ပါတယ်
CPU အပိုင်းမှာလည်း MTK Chipset ကိုသုံးထားလို့ မပူဘူး အားခံတယ် ဂိမ်းတွေလည်းကောင်းကောင်းဆော့လို့ကောင်းမှာ ကြိမ်းသေမှာပါပဲ Motion တွေလည်းပါတော့ Double Touch ဆိုပါဝါပွင့်တာ C ဆိုဖုန်းပွင့်တာလည်း လုပ်လို့ရတယ်နော် ကျန်တဲ့ကလိစရာတွေလည်းကြံသေးတယ်နော့်
Camera ဘေးဘက်မှာဖြစ်ပြီး Font 5.0 MP ဖြစ်ပြီး Back Camera ကတော့ 8MP ဖြစ်ပါတယ် အရှည်ကတော့ ၆လက်မဖြစ်ပြီး Super AMoLED သုံးထားပြီး Touch ပိုင်းကလည်း
Memory:Ram 1 GB/Rom 8 GB MicroSD upto 32 GB
Display:6" QHD IPS LCD Capacitive 960*540pixels
Simcard:2simcard Support
Network:GSM 2G : 800/900/1800/2100 MHz. WCDMA 3G : 850/2100MHz.
Camera:Front 5.0 MP / Rear 8.0 MP
Operating System:Andorid 6.0 Marshmallow
Multimedia:FM Tuner/Video-Music Player
Colour=Gold,,Rose Gold pirce=11,0000
: တန်ဆောင်တိုင် အထူး Smartphone Promotion (NIPDA ယိုးဒယားဟန်းဆတ်)(13.11.2016မှ18.10.2016ထိ)
: တန်ဆောင်တိုင် အထူး Handset Promotion လေးချပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ၀ယ်ယူသူများအနေဖြင့် လက်ဆောင်တွေအများကြီးဖြင့် ၀ယ်ယူရနိုင်ပါတယ် လာဝယ်ရင်းလည်း...
ဖုန်းတိုင်းမှာ ထည့်ထားသင့်တဲ့ QR Code Reader
IDM 6.26 B 12 Full
ကိုယ့် Gmail မဆုံးရှုံးအောင် သိထားရမယ့် အချက် ၉ ချ...
ဖုန်းဆိုင်များအား Smartphoe မျိူးစုံ ၊ Accessorie...
အရေအသွေးကောင်း ဈေးနူန်းချိူ သာ အကြမ်းခံသည့် ထိုင်...
မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်များအတွက် ဆွေသဟာMobile မှ အမြတ်...
သင် အသက်(၂၀မှ ၂၈ )အတွင်း ဆိုရင် ဒါကိုမဖြစ်မနေဖတ်...
Selfie ဓာတ်ပုံအလှဆုံး ရိုက်နိုင်မယ့် Bestie - Inst...
ဖုန်း အဝင်/အထွက် ပြောဆိုမှုကို အလိုအလျောက် အသံဖမ်းေ...
Messenger Official Update v.97.0.0.13.71
Android Playe ထဲမှာ အကောင်းဆုံး MX Player Update v...
Facebook Official Update version 103.0.0.20.72
သူငယ်ချင်းအချစ်( Yar hu feat.saw htet) ~~ တိတ်တခို...
တန်ဆောင်တိုင် အထူး Smartphone Promotion (NIPDA ယို...
အမျိုးသမီးတိုင်း မှီဝဲသင့်သည့် အဟာရဓာတ် (၁၀) မျိုး...
Voice Changer app:
(Holiday song) New Song (ဒီသီချင်းကို အားလပ်ရက်မ...
Mobile Software ပိုင်းနည်းပညာကို လေ့လာချင်သော်လည်း...
မက်ဇူကာဘတ် ရဲ့ မလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် ၄၅...
အမြို့မြို့နယ်နယ်က Mobile Service သမားတွေအတွက် နော...
Android နဲ့ iOS အတွက် ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Microsoft S...
ဒေါ်လာ ၁၀၀ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မြင့် Xiaom...
Maxxcall Handset များ promotion ချလိုက်ပါပြီ။(Maxx...
USB OTG ဆိုတာဘာလဲ . . . ? ဘယ်လို အသုံးဝင်တာလဲ . . ...
အွန်လိုင်းကနေ သင်ခန်းစာများ သင်ယူနိုင်တဲ့ Website ...
ဘာကြောင့် စမတ်ဖုန်းတွေ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံတွေချည်း ...
ဈေးကွက်တွင်းဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ RAM 6GB ပါ Androi...
မိမိရဲ့ဘလောမှာ့Highlight Author Commentလုပ်ချင်ရင်...
စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ ဖေ့စ်ဘွတ် Live ဗီဒီယိုနို...
Frozen Keyboard အလန်းများ